Okwukwe nke a mkpụrụ osisi mọstad
Olee otú anyị pụrụ ikere òkè n'ime ihe ndị kweere, ka ibu na okwukwe siri ike karị?
E nwekwara ọtụtụ n'etiti ndị Chineke bụ ndị nwere àgwà na-okwukwe siri ike bụ ihe utopian na apụghị iru. Ma, nke ahụ ọ bụghị ihe niile. Anyị ga-ahụ na Akwụkwọ Nsọ na-egosi ihe okwukwe bụ.
The Bible na-akọ ọtụtụ ihe banyere okwukwe na mkpa na-okwukwe. Ọtụtụ ndị Kraịst chọrọ ka okwukwe ha na-eto eto, nke mere na okwukwe na-akawanye ibu na ike. Ọ bụ nnọọ ekwe omume na-enweta ya.
E nwekwara ọtụtụ n'etiti ndị Chineke bụ ndị nwere àgwà na-okwukwe siri ike bụ ihe utopian na apụghị iru. Ma, nke ahụ ọ bụghị ihe niile. Anyị ga-ahụ na Akwụkwọ Nsọ na-egosi ihe okwukwe bụ. Anyị na-agụ na Mb, Hibru. 11: 1:
"Ma okwukwe bụ a nkwenye nke ihe na-ele anya, ndị na-egosi ihe na-ahụbeghị."
Okwukwe abụghị ihe ọtụtụ ndị chere, ihe ọtụtụ ndị chere ma ọ bụ anya isi na otu onye bụ bụghị nnọọ n'aka. Faith nwere ihe ọ bụla na-eme na-ahụ nwee uche ziri ezi, otú anyị na-aghọta ihe na uche anyị.
Ọtụtụ mgbe, anyị na-asị: "M na-eche otú ahụ na otú ahụ, ma m na na na na." N'ebe a na-abịa ọtụtụ ndị chere, ikekwe a conjecture ma ọ bụ ịkọ nkọ. Okwukwe bụ ihe dị iche iche, ihe siri ike, nnọọ mma. Okwukwe bụ a tụkwasịrị obi ná nkwa Chineke na na nkwenye nke eziokwu nke ihe adịghị anya. N'amaokwu 3 kwuru nke a:
"Ọ bụ okwukwe anyị na-aghọta na eluigwe na ala na e kere site n'okwu Chineke, nke mere na visual na-adịghị mere nke ihe anyị nwere ike ịhụ."
Site n'okwukwe na-ezi uche na nghọta. Otu na-aghọta site na okwukwe. Faith aga gabiga ụwa na bụ anya anya na esịmde n'ime eziokwu n'azụ anya. Anyị na-agụ: "Site n'okwukwe anyị na-aghọta." Ọ bụ eziokwu ahụ. Ma na-enweghị nchegharị ndị mmadụ na-mbịne ya niile, na-ekwu, sị: "Site na n'uche, anyị kwere." Ọ bụ ngwaahịa nke anụ ahụ nwee uche ziri ezi na ndị nkịtị "nkịtị uche".
Olee otú anyị pụrụ ikere òkè n'ime ihe ndị kweere, ka ibu na okwukwe siri ike karị? The Bible kwuru, sị:
"Okwukwe si n'onunu puta site n'okwu Chineke."
Faith na-abịa mgbe anyị na-ege ihe Baịbụl na-akụzi mgbe ọ na-eyi site a na-ekwusa nke nwere nghọta miri emi okwu Chineke. Faith na-abịa site Ugboro ịgụ Bible na Mmụọ Nsọ na-eduzi. The Holy mmụọ aran bụ nnọọ mma Bible nkụzi. Na-agụ Okwu ahụ, ọ dị mkpa na-elekwasị anya karịsịa na nkwa, n'ihi na Chineke kwuru, ha na-enye, na o kwere nkwa na ọ na-esetịpụ. Ị ga-n'ezie jidesienụ nkwa na Bible, n'ihi na ha na-ebu anyị.
Abraham bụ nwoke nwere okwukwe siri ike. Chineke nyere ya nkwa nke a nwa, nke bụ a ndu na-apụghị ime. Ma ọ pụrụ ịhụ ka-agaghị ekwe omume na ka kweere na ọ bụ kpamkpam kwere omume. Anyị na-agụ verbatim si nuBibeln, Rome. 4: 18-22:
18 "Ọ bụ ezie na e nweghị olileanya, Abraham na-ele anya na agbanyeghị na echiche, na otú ọ mua ọ bụ ya bụ nna nke ọtụtụ mba, dị ka ọ na a sịrị, 'N'ihi ya, ọtụtụ ga ụmụ gị ịbụ.'
19 Ya mere Abraham obiab bụghị na okwukwe ha, n'agbanyeghị na ọ bụ banyere otu narị afọ na-eche na na aru-ya dịghị ike, na ọ bụ ezie ya Sera nwunye-enwebeghị ike ụmụ, na ugbu a na ọ bụ dị nnọọ ochie.
20 Ọ dịghị mgbe ha nwere obi abụọ na ekweghi-ekwe na nkwa nke Chineke, n'ihi na okwukwe ya nye ya ike, o wee na-asọpụrụ Chineke.
21 Ọ bụ kwenyesiri ike na Chineke nwere ike ime ihe ọ bụla o kwere nkwa,
22 na ọ na-aghọ ya dị ka ezi omume. "
Ọ bụrụ na anyị na-Abraham dị ka ihe atụ, anyị na-ahụ a gọziri agọzi ohere na-eto eto okwukwe. Na 1917 translation agụ, sị:
"... ọ bụ kama na ike na okwukwe ha; inye Chineke otuto ... "
Iji nsọpụrụ Chineke bụ otu ụzọ na-a siri ike na okwukwe. Ma mgbe ahụ, na ebube nke Onyenwe anyị na nke ziri ezi. Ị nwere ike ime ka ọ na-ekwu na Isaiah. 29:13 (nuBibeln):
"Ndị a nso m na okwu ha na-asọpụrụ m n'ọnụ ha, ma obi ha dị anya n'ebe m nọ, na ha egwu Chineke na-naanị mụtara nke mmadụ."
Ọ na-abịa ka obi na-agụnye na-asọpụrụ Chineke na ndụ ya, na-eche, okwu na omume. Ọ mere Abraham.
N'otu oge na-eso ụzọ Jizọs jụrụ mgba okwukwe ha. "Dịkwuo okwukwe anyị," ka ha kwuru. Jizọs zara ha, Matt. 17:20:
"... N'ezie, ana m asị unu, Ọ bụrụ na unu nwere okwukwe dị ka mkpụrụ osisi mọstad, unu ga-asị ugwu a, Si n'ebe a gafee n'ebe nke ọzọ, ọ ga-akpali; na ihe ọ bụla ga-ekwe unu omume."
Ọ dịghị ihe a ekwere na nkwa n'Okwu Chineke, ma ọ bụ maka abamuru nke ụmụ Chineke agaghị ekwe omume maka ndị nwere okwukwe dị ka mkpụrụ osisi mọstad. Ezi okwukwe na-etinye ha dum tụkwasị Chineke obi na e kpughere ekpughe na okwu na uche Ya.
Jizọs nyere a nkwa dị ebube na Jọn. 14:12
"N'ezie, n'ezie, ana m asị unu, Onye na-ekwere na m ga-eme na ọrụ m na-eme; ukwuu ọrụ ndị ka ndị a ọ ga-eme, n'ihi na m na-aga My Nna."
Nke a pụtara na ha na-ekwe omume n'ihi niile nwere ezi okwukwe na Jizọs na-eme ọrụ na ya, na ọbụna ibu karịa ka o mere. Ọ a utopia, ihe apụghị iru? Ọ dịghị ma ọlị! Site n'ige ntị Spirit-jupụta nkwusa na-ezi na ịdị uchu na-agụ ma na-amụ Okwu Chineke nwere ike irite uru na nkwenkwe dị otú ahụ.
Vecka 19, torsdag 13 maj 2021 kl. 06:01